Fanentanana “Alatsinany Mainty” Tao Kambodza Ho Fitadiavana Fanafahana Ho An’ireo Mpiaro Zon’Olombelona Nofonjaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Jona 2016 6:08 GMT
Natao ny “Alatsinainy Mainty”, taorian'ny nisamboran'ny polisy ireo manampahefana efatra avy amin'ilay vondrona mpiaro zon'olombelona ADHOC, sy manampahefana iray amin'ny resaka fifidianana, nampangaina ho nanao kolikoly taminà ramatoa iray mba hampanginana azy manoloana ny raharaha ‘firaisana ara-nofo’ maha-voarohirohy an'i Kem Sokha, mpitarika faharoa isan'ny manandanja indrindra amin'ireo mpanohitra ao amin'ny firenena. Itrikitrihan'ny ADHOC fa ny resaka fanampiana araka ny lalàna ihany no ataon'ilay vondrona ho an'ilay ramatoa, ao anatin'ny asa maha-mpisolovava azy.
Ny fitànana ireo mpikatroka sy ny vesatra heloka bevava anenjehana ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohitra dia nanainga ireo vondrona samihafa hivondrona mba hanangana ny fanentanana “Alatsinainy Mainty”, izay nohosoran'ny governemanta ho “fikomiana an-tanandehibe”. Nandrahona ihany koa ireo manampahefana fa hisambotra mpikatroka bebe kokoa, raha toa natao tsy nahazoana alàlana ireo hetsi-panoherana. Nilaza tamin'ireo mpikatroka aza ny polisy fa tsy maintsy mahazo ny fanomezandàlana avy amin'ny fanjakàna ry zareo alohan'ny handefasan'izy ireo fomba fijery mifanohitra ao amin'ny Facebook.
Afaka jerena ety anaty aterineto amin'ny fampiasàna ny tenifototra “#FreeHRDKH” ilay fanentanana “Afaho Ireo Mpiaro Zon'Olombelona”.
Hatramin'ny 83 ihany koa ireo vondrona fiarahamonina sivily nanasonia fanambaràna iray manameloka ireo fihetsiky ny governemanta Kambodziana:
Efa telopolo taona mahery sahady no eo amin'ny fitondràna ny antokon'ny mpitondra ao Kambodza. Niampangàna azy ny fanodinkodinana voka-pifidianana tamin'ny 2013, izay nitondra ny mpanohitra hibodo ny parlemanta. Nifarana tamin'ny Aogositra 201 ilay fibodoana, nitondra ny maro hiandrandra “kolontsaina vaovaon'ny fifanakalozankevitra” eo amin'ireo antoko politika goavana eo amin'ny firenena. Saingy tamin'ny taona lasa, nitaraina ireo mpitarika ny antoko mpanohitra noho ny antsojay politika atao azy rehefa nisy antontan-taratasy natao hanenjehana azy ireo ho nanao heloka bevava. Voatery indray i Sam Rainsy, iray amin'ireo mpitarika mpanohitra ao amin'ny firenena, hanao sesitany ny tenany mba hidifiana amin'ny famonjàna azy taorian'ny namohazan'ny governemanta (indray) ny fiampangana azy noho ny resaka fanalàna baràka.
Tamin'ity herinandro ity, nifidy nandany ireo vesatra fiampangàna an'i Kem Sokha ny antoko eo amin'ny fitondràna, na dia misitraka ny zo tsy azo enjehana ananan'ireo parlemantera aza izy.
Ny 31 May, ny mpitondra tenin'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana dia naneho ahiahy momba ny toedraharaha politika ao Kambodza:
Tamin'ny volana lasa, namoaka fanambaràna miharo teny henjana ireo manampahaizana manokan'ny Firenena Mikambana momba ny tetikady fanentanana ataon'ny antoko eo amin'ny fitondràna ao Kambodza hanao antsojay amin'ny mpanohitra sy ireo mpikambana avy amin'ny fiarahamonina sivily :